ကျောက်ပန်းတောင်းမှာ အသတ်ခံရတဲ့ မြွှေက ဝင်ပူးပြီး သတ်သူများကို သတိပေးနေတဲ့ဖြစ်ရပ်... - MM Live News
မြွေကိုသတ်​သူကို မြွေကိုယ်​တိုင်​ဝင်​ပူး၍ သတိ​ပေးသွား​သောဖြစ်​စဉ်​ ( ရုပ်သံ )
ည ၈ နာရီမှာ ​ကျောက်​ပန်း​တောင်းမြို့ကြွယ်​ဝ​တောင်​မှာ ​မြွေမှသုကိုသတ်​သူကိုယ်​တိုင်​ဝင်​ပူး၍ သတိ​ပေးသွား​သောဖြစ်​စဉ်​​လေးပါ….
ဖြစ်​စဉ်​အစက​တော့ရထားလမ်းနဲ့ကြွယ်​​တောင်​သွားရာလမ်းသပွတ်​ပင်​တွင်​​မြွေ​ပွေးတ​ကောင်​ကသူတွင်းထဲဝင်​မလို့အလုပ်​မှာ ကြွက်​ကိုလဲမြိုထား​တော့ တွင်းထဲမ​ရောက်​ပဲပြုတ်​ကျတဲ့အချိန်​…
ကြွယ်​​တောင်​ရွာမှအလုပ်​ပြန်​သူ ၃ ဦးက ​တွေ့ရှိသဖြင့်​​မြွေ​မြွေဟု​အော်​ကြရာရထားလမ်းတဖက်​ခြမ်းတွင်​​နေထိုင်​​သောသူများကကြားရှိပီးချက်​ချင်းသတ်​၍ယူသွားကြပါသည်​…..
လက်​​တွေ​ရောနှာ​ခေါင်း​တွေပါးစပ်​​တွေနဲ့ပါ တဖူးဖူးမှုတ်​၍ ဝင်​မလို​တွေဖြစ်​​နေလို့အနီးနားရှိသူ​တွေမှ​တောင်းပန်​ပီးလိုတာ​ပြောပါလို့​ပြောတဲ့အခနွားနို့​ပေးပါပဲ​တောင်း​နေပီးငါက​လေး​တွေရှိတယ်​လို့လဲ​ပြောပါတယ်​။
ဤအနီးနားတွင်ကြွယ်​ဝ​တောင်​၏ရာဇဝင်​ကိုကြားသိ​နေရ​သော်​လည်း မယုံတာလည်းမဟုတ်​ ယုံတာလည်းမဟုတ်​ယခုမူလက်​​တွေ့မြင်​လိုက်​ရ​လေပီ မယုံလို့မရတာကို လက်​​တွေ့ပြ​လေပီ ဝင်​ပူးတဲ့ vedio ​file ​လေးတင်​​ပေးလိုက်​ပါတ်​​နော်…..။
မွှကေိုသတျ​သူကို မွှကေိုယျ​တိုငျ​ဝငျ​ပူး၍ သတိ​ပေးသှား​သောဖွဈ​စဉျ​ ( ရုပျသံ )
ည ၈ နာရီမှာ ​ကြောကျ​ပနျး​တောငျးမွို့ကွှယျ​ဝ​တောငျ​မှာ ​မွှမှေသုကိုသတျ​သူကိုယျ​တိုငျ​ဝငျ​ပူး၍ သတိ​ပေးသှား​သောဖွဈ​စဉျ​​လေးပါ….
ဖွဈ​စဉျ​အစက​တော့ရထားလမျးနဲ့ကွှယျ​​တောငျ​သှားရာလမျးသပှတျ​ပငျ​တှငျ​​မွှေ​ပှေးတ​ကောငျ​ကသူတှငျးထဲဝငျ​မလို့အလုပျ​မှာ ကွှကျ​ကိုလဲမွိုထား​တော့ တှငျးထဲမ​ရောကျ​ပဲပွုတျ​ကတြဲ့အခြိနျ​…
ကွှယျ​​တောငျ​ရှာမှအလုပျ​ပွနျ​သူ ၃ ဦးက ​တှရှေိ့သဖွငျ့​​မွှေ​မွှဟေု​အျော​ကွရာရထားလမျးတဖကျ​ခွမျးတှငျ​​နထေိုငျ​​သောသူမြားကကွားရှိပီးခကျြ​ခငျြးသတျ​၍ယူသှားကွပါသညျ​…..
လကျ​​တှေ​ရောနှာ​ခေါငျး​တှပေါးစပျ​​တှနေဲ့ပါ တဖူးဖူးမှုတျ​၍ ဝငျ​မလို​တှဖွေဈ​​နလေို့အနီးနားရှိသူ​တှမှေ​တောငျးပနျ​ပီးလိုတာ​ပွောပါလို့​ပွောတဲ့အခနှားနို့​ပေးပါပဲ​တောငျး​နပေီးငါက​လေး​တှရှေိတယျ​လို့လဲ​ပွောပါတယျ​။
ဤအနီးနားတှငျကွှယျ​ဝ​တောငျ​၏ရာဇဝငျ​ကိုကွားသိ​နရေ​သျော​လညျး မယုံတာလညျးမဟုတျ​ ယုံတာလညျးမဟုတျ​ယခုမူလကျ​​တှမွေ့ငျ​လိုကျ​ရ​လပေီ မယုံလို့မရတာကို လကျ​​တှပွေ့​လပေီ ဝငျ​ပူးတဲ့ vedio ​file ​လေးတငျ​​ပေးလိုကျ​ပါတျ​​နျော…..။
ချစ်သူကို ယုံစားပြီး ချိန်းတဲ့နေရာထိ လိုက်လာမိတဲ့ ၁၄ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးရဲ့ ဖြစ်ရပ်…
May 13, 2019 MM Live
August 20, 2018 MM Live News
ဂူမှ ထွက်လာသည့် မိုင်းဖုန်းဆရာတော် လူထုဧည့်ပရိတ်သတ်အား တရားချီးမြှင့်…
October 26, 2018 MM Live